Dowladda Puntland oo ka digtay dhaqangelinta Sharciga Isgaarsiinta Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Dowladda Puntland oo ka digtay dhaqangelinta Sharciga Isgaarsiinta Soomaaliya
Cabdirisaaq Cumar Ismaaciil (Sheekhaduun)
GAROOWE – Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Puntland ayaa maanta ka digtay in la dhaqangeliyo xeerka Isgaarsiinta Soomaaliya kaasoo bishii hore ay ansixiyeen Gollaha Wasiirada ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Kheyre.
Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Cabdirisaaq Cumar Ismaaciil (Sheekhaduun) oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa eedeyn u jeediyey Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Cabdirisaaq Sheekhadduun ayaa ku eedeeyey Wasiirka Isgaarsiinta Federaalka in uu baalmaray wixii lagu heshiiyey shirkii bishii May ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana uu xagal daacinayo shir ka dhici lahaa magaalada Kismaayo kaasoo looga hadli lahaa xeerka Isgaarsiinta Soomaaliya.
Ka qaybgalkayaga iyo qaybqaadatashadayada la waayo waxay meelkadhac ku tahay xeerkaasi, wasaaradu waxay isku dayaysaa inay xagaldaaciso shirka kismaayo oo maamul goboleedyadu rayigooda geeyaan” ayuu yiri, wuxuuna sii raaciyay
Sharcigaasi ma ah mid lagu heshiiyay, waa sharci xaaraan ah, qaybna kama nihin,Puntlandna qayb kama ahaan doonto, waxaanuna taageersanahay shirka kismaayo” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya in aysan ansixin xeerkaas inta laga heshiinayo,waxaa kaloo uu ugu baaqay hay’adaha caalamiga ah ee maalgelinaya xeerka Isgaarsiinta Federaalka oo ay ka fiirsadaan taageeradooda.